28 July – Maalinta Caalamiga ee Cagaarshowga. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka July 29, 2017	0 153 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Maalinta Caalamiga ee Cagaarshowga waxaa la xusaa 28 July sanad kasta si dunida loogu mideeyo kor u qaadista wacyiga la xiriira mushikiladda guud ee cudurka iyo in lagu dhiirr-geliyo is-baddal dhab ah. Waa maalin fursad looga dhigay biirinta dadaallada lagu dhaqan-geliyo mashruuca caafimaadka caalamiga ee WHO ku doonayso xakamaynta cudurkan marka la gaaro sanadka 2021 – iyo in sidoo kale laga caawiyo xubnaha ku jira QM inay ku guuleystaan hadafka ugu danbeeya oo ah – cirib-tir Cagaarshowga.
Previous: Taariikhda Qoran – Dooxadii Mag Ari.
Next: 30 July – Maalinta Caalamiga ee Saaxiibtinimada.